Nhau - BMW inomisa dutu ine rakashomeka shanduro Rima Shadow X7 SUV
BMW inoisa dutu rine rakashomeka vhezheni Rima Shadow X7 SUV
BMW Australia ichaganhurira kugoverwa kweiyo nyowani X7 Dark Shadow Edition mamodheru kune xDrive30d uye M50i mamodheru, uye ichavhurwa munharaunda muno munaKurume 2021, iine mashanu chete emhando imwe neimwe.
BMW Shopinobatsira kuchengetedza nekuda dhipoziti yemadhora zviuru zvishanu, wozoisa odha uye nekuzivisa mutengi anosarudzika mutengesi wekubvunzana uye pakupedzisira kupihwa nekutumirwa muna 2021.
BMW X7 Rima Shadhi Dhizaini inokwenenzvera BMW yakasarudzika yakasarudzika zvigadzirwa zvemuchirongwa kekutanga kuti ipe yakajeka pfungwa yemirairo. Ine ruvara rumwe chete. BMW Inokurumidza Frozen Arctic Grey Metallic.
Chitarisiko chine simba chinopedzisa iyo V-Spoke 22-inch mwenje alloy mavhiri neJet Dema matte kupera.
BMW yakasarudzika yakasarudzika yemumvuri mutsetse neakawedzeredzwa zvemukati kutsiva chrome kupedzisa kupa yakakwira kutaridzika maonero, nepo girazi regirazi regirazi rinowedzera kuoneka kunoshamisa apo richipa humwe hwakavanzika kune avo vepamberi pechigaro vafambi.
Iyo bhuruu iconic M Sport brake calipers inosanganiswa neyebhuruu X dhizaini yezvimiro zveBMW Laserlight system inopa simba rakasiyana.
Iyo X7 Yakasviba Shadow Edition kabhini inoratidzirwa neepamberi zvinhu uye dhizaini zvinhu zvakasarudzika kune iyi modhi. Inoshongedzerwa nemhando yepamusoro yeBMW zvigaro uye yakashongedzwa nezvinyoro-zviviri toni izere dehwe Merino husiku bhuruu / dema uye yakakwirira-magumo ekumonera mapatani.
Jongwe rejongwe rinoratidza matoni akapfuma akadzika mudenga, uye inogadzirwa neBMW yakasarudzika Walknappa yeganda Husiku Bhuruu kubva kumusoro kwechikamu chedashboard uye nepamusoro pegedhi pamusoro.
BMW yakasarudzika Alcantara padenga yakamhara nerima bhuruu inopenya inopa zvishoma nezvishoma imwe nzira kune echinyakare zvigadzirwa nepo ichiwedzera pfungwa yekunatsiridza.
Yakagadzirwa zvakagadzirwa nealuminium inlays inoshongedza mukati memukati meBMW Individual'Fineline Nhema ', rinova iro danho rekutanga reBMW X7, iyo inopa isina musono aesthetic mhedzisiro nekubatanidza izvo zviviri zvinhu.
BMW's iconic Yakagadzirwa Yakajeka kristaro girazi yekugadzira tekinoroji inoiswa kune inosarudza chinosarudza, iDrive controller uye "Start / Stop" bhatani, ichiwedzera inonakidza uye yakanakisa kunzwa.
Iyo "Edition Rima Mumvuri" chiratidzo pane iyo yepakati koni inosimbisa iyo yakasarudzika yemuenzaniso iyi uchiwedzera yepamusoro-mhando yekushongedza mhedzisiro.
Iyo X7 Shadow Edition imotokari inozivikanwa kwazvo yekutanga-kirasi nyaradzo, yakasarudzika kutyaira uye kubata hunhu, uye yakazara yakazara chiyero chemidziyo, ichipa imwe yekuyevedza kukwezva uye zvishandiso.
Iyo 3.0-litre 6-humburumbira turbo dhiziri injini yeXDrive30d M Sport inogona kupa 195kW uye 620Nm yesimba, nepo inzvimbo yepamusoro M50i's 4.4-litre 8-cylinder twin-turbo peturu injini ine simba re 390kW uye 750Nm.
Mutengo weRima Shadow X7 wakaiswa pa $ 188,900 ye xDrive30d M Sport (nemota) uye $ 215,900 yeM50i (nemota). Kugadziriswa kweiyo Rima Shadow Edition kunoitwa zvizere online kuburikidza neBMW Chitoro chitsva, pane yekutanga-kuuya, yekutanga-yakapihwa hwaro.
Kugamuchirwa kuAustralia manotsi. Chikwata chedu chevanyori venhau, vanyori uye bvunzo vatyairi vakazvipira kukupa iwe yazvino mota uye mudhudhudhu nhau uye ongororo, pamwe nezano raunogona kuvimba.
Isu tinosimudzira sirogani yekupa yakatendeka, yetsika uye yakatenderedza maonero, uye tinovimba kuti nyaya dzaunoverenga dzinovaraidza, dzinodzidzisa, dzakasarudzika uye dzinonakidza.
Post nguva: Jan-21-2021